MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 888
တပ်မတော် ထိုးစစ်ကြောင့် KIA က ဒေသခံများအား ရွာပြောင်းရွှေ့ခိုင်း
>Infrastructure by Dr Maung Ba Chit
>Suu and film stars
>Aung Way poem: Name
> စွယ်စုံရအနုပညာရှင် ဇာဂနာ၏ သမီး ငယ်ဦးမွန်။ နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့၊ ဟောလိဝုဒ်လမ်း (Hollywood boulevard)ပေါ်ရှိ ဓာတ်ပုံဆိုင်တခုတွင် ရိုက်ကူးထားသောပုံဖြစ်သည်။ အဆိုပါလမ်းတွင် ရုပ်ရှင်၊ ဂီတနယ်ပယ်မှ ထင်ရှားသူတို့၏အမည်များကို...
> နေဘုန်းလတ် သို့မဟုတ် ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော် သန်းစိုးလှိုင် နိုဝင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈ ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော်ဆိုတဲ့ အင်တာနက် ဘလော့ဆိုက်ကို မကြာမကြာ ဝင်ကြည့်မိတယ်။ ဒါဟာ ဘာနဲ့ တူသလဲ ဆိုတော့...
>full moon day of Tazaungmone
> ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (၂၅၄)သံဃာတော်များနေ့မာမာအေးနိုဝင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၈ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်- မာအေးချစ်တဲ့ သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့ အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ၊...
> အမျိုးသားနေ့ (တံဆိပ်ခေါင်းများ) ဦးအုန်းကျော် နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၈ “၁၉၂ဝ မှာ ကောလိပ်ကျောင်းသားတွေ အင်္ဂလိပ်အစိုးရကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဆန္ဒပြ၊ သပိတ်မှောက်လို့ ‘အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့’ စပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ ကျနော် မှတ်ထားမိတယ်။...
>Burmese football game goers under the pointing guns of riot police
> လုံထိန်းများက ဘောလုံးပွဲပရိသတ်ကို သေနတ်နဲ့ချိန် မိုးမခ အထောက်တော် (ရန်ကုန်) နိုဝင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၈ ယမန်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏအားကစားကွင်းတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် မြန်မာ-အင်ဒိုနီးရှား ဗိုလ်လုပွဲအပြီး အနိုင်ရ မြန်မာအသင်းအား ဂုဏ်ပြုသည့်...
>Maung Yit – Towards People Power
> စစ်အာဏာရှင်တို့က ပြည်သူ့အာဏာကို စိန်ခေါ်ပြီ မောင်ရစ် နိုဝင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၈ စစ်အာဏာရှင်တို့က ၎င်းတို့ ပိပြားအောင်ဖိနှိပ်ထားသော ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးကို စိန်ခေါ်ပြီးရင်း စိန်ခေါ်လျက်ရှိသည်။ သံဃာတော်တို့ကို သတ်ဖြတ်ပြီး၊ အပြစ်မဲ့သော တောင်သူလယ်သမားနှင့် ရေလုပ်ငန်းလုပ်သားပြည်သူတို့ကို...
>Min Thu Won-National Day
> အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ မင်္ဂလာခွန်းဆက် မင်းသုဝဏ် နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၈ အိုးဝေတဲ့ညံညံ။ ရွှေဒေါင်းပျို တောင်ညိုဦးမှာ ကျူးရင့်အောင်သံ။ အောင်ပွဲရယ်ခံ နိုင်ငံတဲ့သာရေး။ မင်္ဂလာ စည်တော်ရွှမ်းချိန်မို့ ခွန်းချိုဆက်တေး။ ။ မင်းသုဝဏ် ကြီးပွားရေး...
>Maung Swan Yi – 75th birthday of Tin Moe
> တင်မိုးရဲ့လွယ်အိတ်မောင်စွမ်းရည်နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၈ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သူထိုင်နေဆဲ၊ ဗြုန်းကနဲဆိုလဲကျတုန်းက၊ ပခုံးမှာချိတ်သူ့လွယ်အိတ်လည်း၊ ပခုံးထိပ်ကပြုတ်ကျမြေမှာ ခွေခွေလေး။ လွယ်အိတ်ထဲမှာပါမြဲပါတဲ့ပ၀ါ၊ စီးကရက်၊ လက်သည်းညှပ်နဲ့ချွဲကျပ်ပျောက်ဆေး၊ သော့တွဲလေးနဲ့ဆေးသကြားထုပ်၊ မီးခြစ်ထုပ်နဲ့စာအုပ်ကလေး၊ ဖောင်တိန်လေးနဲ့တွေးစ ရေးစ ကဗျာများ။ ခုတော့သူ့လွယ်အိတ်လည်းလွယ်အိတ်သခင်၊ ထားစဉ်ထားရာနံရံမှာပဲ၊...
>Beruma to shoot down Thanshwe Game – 2
> ဘီရုမာရဲ့ သန်းရွှေကို ပစ်ချဖို့ ကွန်ပျုတာကစားနည်း နံပါတ် ၂ ထွက်ပြီ ဘီရုမာ နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts...
>NLD celebrate 88th National Day in Rangoon, Burma
> အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ၈၈ နှစ်မြောက် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနား ကျင်းပ မိုးမခ အထောက်တော် (ရန်ကုန်) နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၈ စစ်အစိုးရက နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံများကို မတရားထောင်ဒဏ်များ ကြီးလေးစွာချမှတ်ပြီး ဖိနှိပ်သည့်ကြားထဲက...
>Aung Way – 17
> ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော် တည်ထောင်ခန်း (၁၇)အောင်ဝေးနိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၈ အကယ်၍ တစုံတယောက်ဟာ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှု၊ မတရားမှုတွေကို မသိကျိုးကျွန်ပြုပြီး ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို နေမယ်ဆိုရင်၊ အဲဒီလူဟာ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ သူ၊ မတရားတဲ့သူတွေဘက်က ရပ်တည်တဲ့လူ အလိုလို...
>Cho Saint – Poem
> ကျောပေါ် က တောင်ယာများ ချိုစိမ့် နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၈ သစ်ခြောက်ပင်ပျောက် တတောလုံး မီးခိုးလွှမ်းခဲ့ရ သူဟာ အမာဆုံး သစ်သား ပြီးတော့ သူ့ အနှစ်အသားတွေကို ချစ်လွန်းလို့ ပေးဆပ်နေသူ...
> အိုင် (I) သုံးလုံး နဲ့ ကိုဇာဂနာ (ဘီဘီစီ) နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် စွယ်စုံအနုပညာရှင် လူရွှင်တော် ကိုဇာဂနာ ခေါ် ကိုသူရကို ဒီကနေ့ အီလက်ထရွန်နစ်...
>Htain Linn – 75th birthday of Tin Moe
> နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၁၅)ကဗျာဆရာကြီး တင်မိုး၏ စိန်ရတု မွေးနေ့ထိန်လင်း နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၈ု တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေဟာ လူတွေရဲ့ ဘဝအနေအထားတွေကို ပြောင်းလဲစေသလို အနုပညာသည်တွေကိုလည်း နိုင်ငံရေးရေစီးကြောင်းထဲမှာ မျောပါစေပါတယ်။ အနုပညာသည်တွေအနေနဲ့...
>Moe Moe Hinnn – Turn of Life – U Tin Moe
> ဘ၀ တဆစ်ချိုး မိုးမိုးနှင်း နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၈ သူမ ပြည်ပ၌ အိမ်ထောင်ပြုအပြီး ၈လ ပင် မကြာ အဖကို ခေါ်ငင် ခဲ့သည်။ သူမ အဖကို လွမ်းခဲ့လှပြီ။...
>Win Pe Bag – 8
> ၀င်းဖေလွယ်အိတ် အမှတ် ၈ကောလိပ်ဂျင်နေ၀င်း (၁၉၂၈-၁၉၈၃) ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း နဲ့ ဦးထွန်းေ၀၀င်းဖေနိုဝင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၈ သောတရှင်များခင်ဗျား၊ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က “မဟူရာ” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကိုရိုက်တဲ့အကြောင်း လေးလေးထွန်းဝေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောခဲ့တော့ အစ်ကိုကြီးကိုနေဝင်းတို့...
> “နေလို လ လို ရဲဘော် နေလ”လင်းနွေးအိမ်နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ဂုရုရေအိပ်မက်တွေပိုက်ပြီး လျှောက်ခဲ့ကြတဲ့တော်လှန်စစ်အနှစ်နှစ်ဆယ် ကာလမှာဌာနတွေမတူခဲ့ကြပေမယ့်ဝါဒတွေတူခဲ့ကြတယ်။ ဂုရုရေဆေးလိပ်တိုလက်ကြားညှပ်ပြီးအဆိပ်ငွေ့တွေရှူရှိုက်ရင်းအသက်ပြင်းပြင်းရေးခဲ့ကြတဲ့ကဗျာတွေထဲမှာပါဒတွေတူခဲ့ကြတယ်။ ဂုရုရေမဲဆောက်က ဆရာလွမ်းရဲ့ ကဗျာစခန်းမှာသူရာနဲ့ ဝရုဏကို ဂုဏ်ပြုကြတုန်းကလဲစရဏတွေ တူခဲ့ကြတယ်။ အခုတော့ရဲဘော်ရေ...
> သွားနှင့်တော့ ဘလော်ဂါဂုရုဇာနည်ဝင်းနိုဝင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၈ ဂုရု ဆုံးသွားပြီ တဲ့။ သတင်းတွေ ၀င်လာတယ်။ သူနဲ့ကျနော် စတွေ့တော့ ၂၀၀၁ တုန်းက။ မဲ့ခေါင်ခဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာ။ အဲဒီစခန်းနဲ့ ဖာပွန်(ကရင်ပြည်နယ်)၊ ဖားဆောင်(ကယားပြည်နယ်) တို့က...
>19th Nov 2008 – Wednesday Weekly Radio Program
> ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက် မိုးမခ ရေဒီယို အစီအစဉ် ကဗျာဆရာ တင်မိုး၏ စိန်ရတု မွေးနေ့အမှတ်တရ အထူးအစီအစဉ် (အမေရိကားရောက် ရွှေမြန်မာများ ဟောပြောချက်၊ ‘အိမ်လည်ကြူးတဲ့ သား’...
> ကျောင်းသားတပ်မတော် ဗဟိုကော်တီဝင်ဟောင်း ကိုနေလ ခေါ် ရဲဘော်မြင့်အောင် ကွယ်လွန် အာရ်အက်ဖ်အေ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ် နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ABSDF ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင် ရဲဘော်မြင့်အောင် ခေါ်...
>75th birthday of Tin Moe
> စိန်ရတု မွေးနေ့ရှင် ဆရာတင်မိုးသို့ထိန်လင်းနိုဝင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ‘စိန်ရတု’ … တဲ့ယခုနှစ် မွေးနေ့မှာမတွေ့နိုင်တဲ့ ဆရာ့အတွက်မျက်ရည်နဲ့ လွမ်းရတော့မည်။ သီချင်း တအေးအေးနဲ့သတင်းမေးရင်း ကိုယ့်ပြည် လွမ်းရှာတဲ့ကန်မြဲရွာ ဇာတိသားကိုမတရားမှု ကြီးစိုးတဲ့ထီးကျိုးပြည်ပျက် လမ်းတဝက်မှာတကယ့်ကို...
>9th Annual Burmese Literary Talk (8th Nov 2008) Part4
> 9th Annual Burmese Literary Talk (8th Nov 2008) Part4Director U Win Pe No tags for this post. Related...
>Nyunt Htwe – Rangoon News on the run on 19th Nov 2008
> ရန်ကုန်တ၀ိုက်က အပြေးအလွှား သတင်းများ ညွန့်ထွေး နိုဝင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ကျောင်းမြေကို စိုက်ပျိုးမြေအဖြစ် ငှားရမ်းခွင့် စစ်တပ်က ပိတ် မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်က စာသင်ကျောင်းများက မြေလွတ်တွေမှာ ဟင်းရွက်စိုက်ခင်းအဖြစ် ငှားရမ်းနေတာကို စစ်အာဏာပိုင်တွေက...
>BBC News Digest on 18th Nov 2008
> ဦးဂမ္ဘီရ – ၁၂ နှစ်၊ ဦးကေလာသ – ၃၅ နှစ် နှင့် ထောင်ဒဏ်များ နှင်းပန်းအိမ်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက် ဘီဘီစီ (မြန်မာပိုင်း) နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက် ၂၀၀၈...
>Saw Wai poem 02
> ရေဒီယိုလေးထဲ ကျွံကျနေတဲ့ ကဗျာဆရာရဲ့ကြေကွဲမှုစောဝေနိုဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈ ငါးကျပ်တန်တရွက်တယ်လီဖုန်းဆက်ခ ပေးလိုက်တော့WTC ၀မ်းနည်းမှုတွေတ၀ုန်းဝုန်း ပြိုကျလာ၊ အဲဒီအပြိုပုံကြီးထဲက ဆဲလ်ဖုန်းကူပါ၊ ကယ်ပါ၊ ဘုရားတသံ၊ နှုတ်ဆက်သံငါ နားကန်းပါရစေ။ ထိတ်လန့်ကြေကွဲ အမြွာလောင်မီးပေါ်က ပ၀ါဖြူလေး...
>Moe Cho Thin & Moe Moe Hninn – The traveller
> ငှက်ကလေး ခရီးသွား မိုးမိုးနှင်း၊ မိုးချိုသင်း နိုဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈ ဒီနေ့ဆို ရန်ကုန်မှာ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ရက်။ အဖေသာ ဒီနေ့ ဒီအချိန်မှာ ရှိတယ်ဆိုရင် အသက် (၇၅) နှစ်...
> သံချိုဇော်မင်း (လူ့ဘောင်သစ်)နိုဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈ သံချိုနဲ့ပတ်သက်လို့ များများစားစား ဗဟုသုတ မရှိပါဘူး။ ဂီတတို့၊ သီချင်းတို့နဲ့ ကျနော်က ဝေးပါတယ်။ သို့သော် မိသားစုနဲ့ ပတ်သက်လို့ မှတ်မိတာလေးတခု ရှိနေခဲ့လို့ သတိရတုန်း...
> မီးခြစ်တဆံ (မောင်သော်က) နိုဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈ (၁) အနှစ်၂၀ ဆိုပါလားဟေ့ …။ အမြင်ကပ်လောက်အောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တပ်မက်စိတ်ရှိသူများက ကြောင်သူတော်သောကနဲ့လေ…။ အနှစ်၂၀ ဆိုပါလားဟေ့ …။ ကောက်ကျစ်သော အမြင်တိုသော...
>More Activists sentensed to heavy jail terms
> ဘလော့ဂါ နေဘုန်းလတ်ကို ဖားအံထောင်ကို ပို့လိုက်ပြီ ဗကသခေါင်းဆောင်တွေကို ထောင် ၁၀ နှစ်ကျော်၊ ကိုထင်ကျော်က ထောင် ၁၂ ခွဲ ဘီဘီစီ (မြန်မာပိုင်း) နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက် ၂၀၀၈...
>Mr Creator – Salute
> Mr Creator – Salute November 17th 2008 No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 888 of 944«1...886887888889890...944»